दैनिक अनलाइन | चैत २१, २०७६ शुक्रबार | 0
काठमाडाैं । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि फेरि थप गर्ने तयारी गरेकाे बताइएकाे छ । कोरोनाका छैटौं संक्रमित फेला परेसँगै सरकारले लकडाउनको अवधि बढाउने तयारी गरेकाे बुझिएकाे हाे ।
यसअघि सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पहिलोपटक गत ११ चैतदेखि १८ सम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो । संक्रमितको संख्या थपिँदै गएपछि दोश्रोपटक गरिएको लकडाउन २५ चैतमा सकिँदैछ । बैशाख ५ सम्म लकडाउन हुनसक्ने बताइएकाे छ ।
विभिन्न देशमा लकडाउन भएपछि यस्ता घटना भए
कोरोना भाइरस विरुद्ध जारी गरिएको 'लडकाउन' ओदश पछि फ्रान्समा घरेलु हिंसाका घटनामा ह्वात्तै वृद्धि आएको बताइएकाे छ । फ्रान्सका आन्तरिक मामिला मन्त्री क्रिस्टोफर कास्टानेरले 'लडकाउन' पछि राजधानी पेरिसमा मात्रै घरेलु हिंसाका घटनामा ३६ प्रतिशतले वृद्धि आएको जनाएका छन्।
हालै त्यहाँ २ महिलाको घरमै हत्या भएका घटना समेत बाहिरिएका छन्। यौन हिंसाका घटनामा वृद्धि आएसँगै फ्रान्सले कडा कदम चाल्ने जनाएको छ। मन्त्री कास्टानेरले हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि टोल फ्री नम्बर खुला तथा उजुरी दिन आह्वान गरिएको बताए। फ्रान्सले घरेलु हिंसाका घटना बढेपछि पिडकलाई थुन्न प्रहरी समेत परिचालन गरेको छ।
घरेलु हिंसाबाट पीडित भएकालाई अलग्गै होटल तथा परामर्श केन्द्रहरूमा राख्ने निर्णय समेत भएको छ। त्यसका लागि सरकारले छुट्टै बजेट छुट्याएको छ। फ्रान्सले गत १७ मार्चमा कोरोनाभाइरस विरुद्ध लकडाउनको आदेश जारी गरेको थियो। लकडाउनपछि खाद्यवस्तु औषधि किन्न तथा डाक्टरलाई भेट्न बाहेक अरुलाई घर छाड्न अनुमति छैन। यसले मानिसहरूलाई घरमै बस्न बाध्य तुल्याएको हो।
पछिल्लो निर्णय अनुसार 'लकडाउन'को अवधि बढाएर अप्रिल १५ सम्म पुर्याइएको छ। हिंस्रक पार्टनरहरूसँग घरमा सीमित रहँदा यसले पीडितहरुलाई जोखिम बढाउँने गर्छ। अभियन्ताहरुले क्वारेन्टाइमा समेत महिला असुरक्षित रहेको बताउने गरेका छन्। युरोपेली देशमध्ये फ्रान्स घरेलु हिंसा धेरै हुने देशमा पर्छ। प्रत्येक बर्ष १८ देखी ७५ बर्षसम्मका २ लाख भन्दा बढि महिलाहरुले यौन हिंसाको सामना गर्ने गरेको तथ्यांक छ। लकडाउन र कोरोनाबाट प्रभावित अर्को युरोपेली देश स्पेनमा पनि घेरलु हिंसाका घटना बढेका छन्। स्पेनले घरेलु हिंसाको उजुरी गर्न कोड प्रणालीनै जारी गरेको छ।
जर्मनी र डेनमार्कको वृद्ध जोडीको उत्कृष्ट प्रेम कथा
कोरोना भाइरस र त्यसको विस्तार हुन नदिन विश्वका अधिकांश मुलुकले लकडाउन गरेका वेला युरोपेली मुलुकहरू जर्मनी र डेनमार्कको वृद्ध जोडीको उत्कृष्ट प्रेमको कथाले विश्वभर चर्चा पाएको छ।
कोरोनाकालमा मौलाएको अनौठो प्रेमकथाका पात्र हुन्– कास्टर्न ट्युखसेन र इङ्गा रासमुसेन। जर्मन नागरिक कास्टर्न ८९ वर्ष पुगिसकेका छन् भने डेनमार्ककी इङ्गा ८५ वर्षकी छन्। कोरोना भाइरस र ‘बोर्डर लकडाउन’ (सीमा बन्द)ले समेत पराजित गर्न नसकेको कास्टर्न र इङ्गाको प्रेमकथा दुई वर्षअघि भेट भएपछि सुरु भएको हो।
आफ्ना पतिको निधनपछि इङ्गा निरसलाग्दो एक्लो जिन्दगी बिताइरहेकी थिइन्। पत्नीको निधनका कारण कास्टर्नको हालत पनि उस्तै थियो। जब संयोगवश दुई वर्षअघि उनीहरूबीच भेट भयो, उनीहरूले फोन साटासाट गरे। नियमित रूपमा फोनमा कुराकानी पनि गर्न थाले।
कुराकानीका क्रममा दुवैमा प्रेमको टुसा पलाउन थालिसकेको थियो। कास्टर्नले अब ढिलो गर्न उचित सम्झेनन्। र, एक दिन प्रेमको प्रस्ताव राख्दै इङ्गालाई गुलाबको थुङ्गा उपहार दिए। हर्षित हुँदै इङ्गाले गुलाबको त्यो थुङ्गा आफ्नो हातमा लिइन्। र, त्यसलाई चुम्बन गरिन्। कास्टर्नको प्रेम–प्रस्तावले इङ्गाको स्वीकृति पायो।
अब के चाहियो? दुवैजना दिनहुँ भेट्न थाले। उनीहरूको बसोवासस्थल जर्मनी–डेनमार्कको सिमाना नजिक भएकाले भेटघाट गर्न पनि सजिलै थियो। भेटघाटका लागि कास्टर्न कहिले इङ्गाको घर पुग्थे भने कहिले इङ्गा आफैँ कास्टर्नको घर धाउँथिन्। जर्मनी र डेनमार्कबीचको सीमा खुला नै भएकाले भेटघाट गर्न उनीहरूलाई कुनै अप्ठेरो थिएन। तर, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण विस्तारसँगै डेनमार्कले (१४ मार्च) १ चैतमा सीमा बन्द गऱ्यो।
त्यसको दुई दिनपछि (१६ मार्च) ३ चैतमा जर्मनीले पनि यस्तै निर्णय लियो। जब जर्मनी र डेनमार्क दुवै मुलुकले सीमा बन्द गरे, त्यसपछि यो जोडीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। अब उनीहरूको कुराकानी र भेटघाट फोनमा सीमित रह्यो।
फोन कुराकानीको क्रममा उनीहरूले के निधो गरे भने, सिमाना पार गरेर भेट्न सकिँदैन भने सिमानामा पुगेर एक–अर्कोसँग भेट गर्ने, भावना साटासाट गर्ने र समय बिताउने। त्यसैले, कास्टर्न साइकलबाट जर्मनी–डेनमार्कको सिमानामा दिनहुँ पुग्न थालेका छन्, ता कि सीमाबाटै भए पनि इङ्गाको एक झल्को देख्न पाइयोस्। यस्तै अपेक्षाका साथ इङ्गा पनि सिमानामा पुग्छिन्। दुवैतर्फको ‘लकडाउन’ले भेटघाटमा समस्या पारे पनि यो जोडीको ‘लभ’ले त्यसलाई त्यो अप्ठ्यारोलाई पराजित गरिदिएको छ।
जब इङ्गा बिहानै उठ्छिन्, कास्टर्नसँग भेटघाटका लागि तयारी सुरु गरिहाल्छिन् । ब्रेकफाष्ट खाइवरी लञ्च (बिहानको खाना) तयार पार्छिन् र सिमानातर्फ रमानाका लागि तयार हुन्छिन्। उनले तयार पारेको त्यो लञ्च उनी एक्लैका लागि होइन, बरु कास्टर्नका लागि पनि हो। दुवैका लागि तयार पारिएको लञ्च त साथमा राखेकी हुन्छिन् नै, कफीको थर्मस पनि बोकेकी हुन्छिन्। एउटा कुर्सी पनि उनको साथमा हुन्छ। इङ्गा जर्मनी–डेनमार्कको सीमासम्म कार चलाएर पुग्छिन्। कास्टर्न वबजुलीबाट चल्ने साइकल चलाउँदै आइपुगेका हुन्छन्।
कास्टर्नको साथमा पनि एउटा छरितो कुर्सी हुन्छ। दुई देशबीचको सिमानामा व्यारियर तेर्स्याइएको छ। कोरोना भाइरस र ‘बोर्डर लकडाउन’का कारण न इङ्गा जर्मन भूमिमा प्रवेश गर्न सक्छिन्, न कास्टर्न डेनमार्कको भूमिमा छिर्न सक्छन्।
एक–अर्को सीमामा प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति नरहेपछि दुवैजना आ–आफ्नो देशको भूमितर्फ साथमा रहेको कुर्सी राख्छन्। इङ्गा आफूले बिहानै तयार पारेर ल्याएको खाना थालीमा पस्कन थाल्छिन्। र, आडैको जर्मन भूभागमा रहेका कास्टर्नलाई दिन्छिन्। दुवैजना खाना खान थाल्छन्। केही समयपछि इङ्गा गिलासमा थर्मसबाट कफी खन्याउन थाल्छिन्। कफी चियर्स गर्दै र पिउँदै यो जोडीले घन्टौँ समय सिमानामा बिताउँछ। र, यसैगरी सिमानाको एक–अर्को कुनाबाट प्रेम साटासाट गर्छ।
लकडाउनभन्दा पहिले जर्मनी–डेनमार्कको सीमा खुला थियो। त्यो वेला पनि यो वृद्ध प्रेमिल जोडी यसैगरी भेटघाट गरिरहन्थ्यो। कास्टर्नलाई भेट्न इङ्गा आफैँ जर्मनीको अभेनटफ्ट इलाकामा पुग्थिन्। भेटघाटका दौरान उनीहरू एक–अर्कोलाई अंगालो हाल्थे, चुम्बन गरेर समय बिताउँथे।
डेनमार्क र जर्मनीले पालैपालो जब एक–अर्कोसँगको सीमा बन्द गरे। तर, नेपाली चलचित्र ‘युगदेखि युगसम्म’ को चर्चित गीत ‘आँधीले रोक्न सक्दैन, बाढीले छेक्न सक्दैन’ बोलको गीतले भनेझैँ यी दुईबीचको प्रेमलाई सीमा बन्दाबन्दीले रोक्न सकेन। उनीहरू फोनमा कुराकानी गरेर चित्त बुझाउन थाले।
केही दिन फोनमा कुराकानी भएपछि भेटघाट र प्रेम साटासाटका लागि उनीहरूले सीमाक्षेत्र रोजे। कोरोना भाइरस र त्यसको संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिन गरिएको लकडाउनले उनीहरूबीचको भेटघाट र प्रेम दुवैलाई रोक्न नसके पनि प्रेमको ‘एक्सप्रेसन’मा भने जरुर बदलाव आएको छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण हुन नदिन अंकमाल नगर्न र हात नमिलाउने उपाय चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्।
त्यसैले, यसअघि भेट्नासाथ अंकमाल गर्ने कास्टर्न र इङ्गा आजकल अंकमाल गर्दैनन्, चुम्बन गर्नु त झन् परैको कुरा भयो। कोरोना भाइरस र लकडाउनले सिर्जना गरेको बाधा–व्यवधानलाई समेत पराजित गर्दै सिमानाको वल्लो–पल्लो कुनामा बसेर आफूहरूको प्रेमलाई अझै परिपक्व बनाएका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी रूपमा जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ, इङ्गा यसलाई ‘दुःखद स्थिति’ भन्न रुचाउँछिन्। ‘तर, के गर्नु, हामी यो स्थितिलाई बदल्न सक्दैनौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘सीमा बन्द भए पनि कास्टर्नलाई भेटौँ–भेटौँ लागिरहन्छ, त्यसैले यहाँसम्म आइपुग्छु।
उनीसँग भेट भएपछि समय बितेको पत्तै हुँदैन। घरैमा एक्लै बस्नुभन्दा उनलाई भेट्न यहाँसम्म धाउने गरेकी छु।’ कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनको अन्त्य छिट्टै भइदेओस् भन्ने कामना कास्टर्न र इङ्गा दुवैको छ। भन्छन्, ‘आगामी इस्टर पर्व (१२ अप्रिल) सम्म सीमा खुल्नेछ। र, हामी पहिले जसरी नै एक–अर्कोसँग भेटघाट र निर्धक्कसँग घुमफिर गर्न सक्नेछौँ।’
रुखजस्तै बनेर घर बाहिर निस्किए
लकडाउनका कारण धेरै देशका मानिस घर बाहिर निस्किन पाएका छैनन्। यसै क्रममा एक व्यक्तिले लकडाउनका समयमा घर बाहिर निस्किन अनौँठो जुक्ति लगाएका छन्। लकडाउनमा रुखका पातहरुबाट बनेको कपडा लगाएर एक जना व्यक्ति बाहिर निस्किएको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। उक्त भिडियो ती व्यक्तिका छिमेकीले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन्।
Daily update on my neighbour...lockdown gets like that. Wait till the end🤣 @repnicktv ##fyp ##fy ##4u ##foryou ##foryoupage ##foryoupagethis ##viral ##tiktok
लकडाउन उग्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश
फिलिपिन्सकामा राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टेले लकडाउन उग्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति रोड्रिगोले पुलिस र सेनालाई लुजोनको टापुमा लागू गरिएको एक महिने लकडाउनका बेला समस्या निम्त्याउने जोकोहीलाई गोली हान्न आदेश दिएका हुन् ।
बुधबार राति टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै रराष्ट्रपति रोड्रिगोले भने, ‘मेरो आदेश प्रहरी र सेनाका अधिकारीलाई हो । यदि कसैले झगडा गर्छ र तपाईंको ज्यानलाई खतरा हुने स्थिति निम्त्याउँछ भने उनीहरुलाई गोली ठोक्नुहोस् ।’
कोरोना भाइरस संकमण रोकताम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले एक महिना लामो लकडाउन गरेपछि त्यहाँ खाद्य सहायताको माग गर्दै प्रर्दशन जनप्रदर्शन गरिएको थियो । सो प्रदर्शनका क्रममा मनिलाको क्युजन सिटीबाट बुधबार २१ जना पक्राउ गरिएका छन् । सरकारसँग राहत माग्दै जनता प्रदर्शन उत्रिन थालेपछि राष्ट्रपति रोड्रिगोले यस्तो कदम चालेका हुन् ।
न्यु साउथ बेल्सले ९० दिनको लक डाउनको घोषणा गरेको छ । लकडाउन ९० दिन पुर्याउने घोषणा सङै जरिवाना रकम पनि वृद्धि गरिएको छ। साउथ वेल्समा लकडाउन उलंघन गरिए एकहजार डलर तिर्नु पर्ने छ ।